Dhimashada “Reer Galbeedka” Buug Cabsi Badan Ku Abuuray Reer Yurub | Xaqiiqonews
Dhimashada “Reer Galbeedka” Buug Cabsi Badan Ku Abuuray Reer Yurub
Wareerka ku dhacay reer galbeedka ma ahan shaqo la’aan, ama wax soo saarkooda oo hoos u dhacay, hase yeeshee mushkiladda ayaa ka taagan Cirqiga iyo muwaadiniinta.
“Hardanka Xadaaradaha” waa ciwaanka buug uu qoray qoraage Ameerikaanka ah Samuel P. Huntington, buugani ayaana bilow u ah sadaasha halis ku soo socota reer galbeedka.
Qoraagga waxa uu leeyahay “Derbigii Barliin iyo burburkii Sofiyet-ka ka dib, dunida hadda waxaa ku hardamaya sideed xadaaradood oo kala fikir ah, hase yeeshee hardanka la filaayo waqtiga dhaw waxa uu u dhaxeeya seddex xadaaradood oo kala ah xadaaradda Hantigoosadka galbeedka, xadaaradda shiinaha iyo xadaaradda Islaamka.”
Balse hardanka fog, waxa uu si rasmi ah uga dhaxeeyaa Xadaaradda Galbeedka iyo tan islaamka sida uu aaminsanyahay Huntington.
Jahwareerka heysta galbeedka ma ahan shaqo la’aan, masuq maasuq ama qabyaalad, arinta wadna xanuunka ku heysa galbeedka ayaa ah Qulqulka qaxootiga, sheekadu waa dhaaftay kumanaan qaxooti ah, hadda waxa ay mareysaa malaayiin qaxooti ah kuwaasi oo caruur ku dhalay kuna sii badanaya gudaha galbeedka, qaxootiga ayaa badalay midibka iyo qaab nololeedkii galbeedka.
Waxaa jiro cilmi-baarisyo cabsi ku abuuray galbeedka kuwaasi oo ay sameeyaan QM iyo CIA-da, cilmi-baarisyada ayaa sheegaya in marka la gaaro sanadka 2050 dunida dadkeeda ay gaari doonaan 9 bilyan oo qof, dadkaasi oo intooda uga badan ay ka soo jeedaan Aasiya, Afrika iyo Latin Amerika, badalkeedana Yurub ayaa dhumin doonto 100 milyan oo qof.
Dadka reer Yurub tiradooda waa 728 Milyan, sida ku cad baaris la sameeyey sanadkii 2000, hase yeeshee marka laga gaaro sanadka 2050 tiradu waxa ay noqon doontaa 600 Milyan.
Galbeedka hadda waxaa ka jira laba fikir oo xoog leh oo isdiin, mid waa fikirka miyiga ee aaminsan diinta masiixiyadda, iyo fikir kale oo gaaray furfur bulsho oo qofka gaarsiinaya in uu kala doorto Calmaaniyadda iyo diinta.
Hadaba dhaqan guurka ilbaxnimo ee ku dhacay iyo fahamka furfuran ayaa waxa lagu faano ka dhigay Galmada, Soo ridista ilmaha, isdilka iyo Maandooriyaasha.
Cadowga dhabta ee galbeedka ma ahan Aasiya, Afirka ama umad kale, kaliya galbeedka isaga ayaa cadow isku ah, taasi oo ka dhalay isku dhaxyaaca, dhaqan guurka, akhlaakhdarrada iyo iyaga oo dib u cunaya nidaamkii abuurista qoyska.
Ma dhaheyno mushkiladda maanta galbeedka heysta waa ciqaab ilaah ama aargoosi cirka kaga yimid,(xitaa hadii uu mudanyahay) laakiin mushkiladda waxa ay tahay siyaasadda argagaxa leh ee galbeedka taasi oo karfin u sameysay umado badan, kana qeyb qaadatay qodista in badan oo ka mid ah qabuuraha.
Waxaa ka soo tajunay Al-Jaziira